५ बर्षमै दुनियाँ चकित पार्दै यी बालिका, यस्तो अचम्मको प्रतिभा (भिडियो हेर्नुहोस्)
Homeसमाचार५ बर्षमै दुनियाँ चकित पार्दै यी बालिका, यस्तो अचम्मको प्रतिभा (भिडियो हेर्नुहोस्)
January 14, 2021 admin समाचार 6987
अहिलेको ज’माना भनेको इन्टरनेट र प्रबिधिको जामाना हो यसस“गै चल्न सकिएन भने हामी जिन्द’गी र हरेक कुरामा पछि पर्छौ अबश्यनै हो त्यही एउटा अहिेलको च’र्चित सामाजिक सन्जाल हो टिकटक । जहाबाट दिनानुदिन बिभिन्न प्रतिभाहरु बाहिर आईरहेका छन र आफनो कलालाई सबै माझ प्रस्तु’त पनि गरिहेका छन ।
टिकटकको क्रेज अहिले य’तिसम्म छ कि यि साना साना नानीहरु पनि टिकटकमा आफूलाई स्था’पित गर्न सफल भईसकेकी छिन । यिनको नाम हो आराध्या राज्य लक्ष्मी डिसी जो अहिले काठमाडौमा बस्दै आईरहेकाी छिन आफनै प’रिबार बुवाआमास“ग ।
यि नानीले यति सानै उमेरमा सबै रेकर्ड तोडेकी छिन नेपाली टिकटक समुदा’यको, कम समयमै ६० हजार फलोवर्स कमाउने पहिलो ५ बर्षिय नानी हुन आराध्या । उनले टिकटकमा बो’लेको सुनन आमा त यति धेरै भाईरल छ कि अहिलेसम्म ४० लाख जतिले हेरेका छन एउटै भिडियो ।
अचम्म छ यति सानै उ’मेरमा यस्ता खत्रा खत्रा डाईलगहरु मज्जाले भन्छिन र अभि’नयमा पनि जादू छ । उनलाई अर्का चर्चित टिकटकर नर्भिस डिसीले गाईड गर्छन । र उनी उनका अंकल पर्छन नातामा । हेर्नुस यि सानी नानीको च’कित पार्ने प्रतिभा — ओएस नेपालबाट
तिव्वतियनको नेपालमा व्यवसायीक घोडा पालन, चीनले स्वदेश फ’र्कन दिएन (भिडियो सहित)
बुबालाइ बृद्धआश्रममा छोड्ने छोराले भने: ‘बाऊ भनेर त्यो बुडोलाई पाल्दा धर्म लाग्छ भने थुक्छु’ (भिडियो सहित)
भाडाको घरमा बस्नेले ध्यान दिनु पर्ने ३ कुराहरू
August 23, 2020 admin समाचार 26756
कुनै व्यक्ति’को सोच हुन्छ की वास्तुशा’स्त्रको लाभ लिनका लागि घरको तोडफोड गर्नुपर्दछ, त्यो भाडाको घरमा बस्नेलाई सम्भव छैन्। त्यस्तै केही व्यक्तिको सोच हुने गर्दछ की वास्तुको प्रभा’व केवल घरमालिकलाई मात्र पर्दछ। तर भाडामा बस्नेलाई पर्दैन।
पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको आज जन्मदिन, कति वर्ष लागिन् उनी ? थाहा पाउनुहोस्
September 30, 2020 admin समाचार 13707
हिमानी शाहको चर्चा उनको सुन्द’रताको कारण पनि हुने गर्दछ । पूर्व राजप’रिवारको पछिल्लो समयको महत्वपूर्ण सदस्य हिमानी शाह अहिले आफ्नै नाममा ट्रष्ट खोलेर समाज’सेवामा ब्यस्त छिन् ।पूर्व युवराज पारस शाहसँग उनको बैवा’हिक सम्बन्ध त्यति सुमधुर
असार १ गते देखि पसलहरु खुल्ने, निषे’धाज्ञा यथावत
June 14, 2021 admin समाचार 4946
४५ दिन लामो ल’कडाउन पछि आज बसेको जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र(डीसीएमसी) को बैठ’कले असार १ गते (मंगलवार) देखि कैलालीमा लक’डाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ । कै’लालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा डीसीएमसीका
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226746)